အံသြအတုယူဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် ခေတ်အဆက်ဆက်မြန်မာသင်္ကြန်ကိုဖော်ကျူးထားသော ထိုင်းလူမျိုးမော်ဒယ်လ်လေးများ - Cele GabarCele Gabar
အံသြအတုယူဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် ခေတ်အဆက်ဆက်မြန်မာသင်္ကြန်ကိုဖော်ကျူးထားသော ထိုင်းလူမျိုးမော်ဒယ်လ်လေးများ
Published: April 3, 20193:52 pm
မြန်မာမှာ ဒါမျိုးလေးတွေ အတွေ့ရနည်ေးတာ့ စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ….
မကြာခင် ပရိသတ်တို့ အားလုံးစောင့်မျှော်နေကြပြီဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နှစ်သစ်အခါသမယလေးကတော့ တဖြေးဖြေးနီးကပ်လို့လာပြီဖြစ်သလို ပရိသတ်တွေလည်း ဒီနေ့ရက်အချိန်အခါလေးအတွက် ကြိုတင်မျှော်လင့်ရင်ခုန်နေကြမှာပါ။
နှစ်သစ်အချိန်အခါဟာ ခေတ်အဆက်ဆက် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျင်းပလာခဲ့သလို ခေတ်အလိုက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ ဖက်ရှင်လ်နဲ့ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုဟာ အစဉ်အလာကြီးမားတဲ့ မြန်မာတို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ဓလေ့ထုံးထမ်းတွေကို ဖော်ပြနေသလို မိုဘိုင်း အင်တာနက်ခေတ်တခုဖြစ်လာတဲ့ ခုခေတ်လူငယ်တွေနဲ့ ဒီအစဉ်အလာတွေဟာ အတော်လေး အလှမ်းဝေးလာသလို ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။
Myanmar thingyan 2019
4 เมษายนนี้ พบกับ ความอลังการ งานสงกรานต์เมียนมาร์ ภาษา ประเพณีและวัฒนธรรมของสาธรณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ณ คณะมนุษยศาสตร์ HB7 มช 08.00 น. เป็นต้นไปThis April 4th 2019, looking forward to seeing Myanmar water festival, language, traditional and culture of the Republic of the Union of Myanmar.At Faculty of Humanities , HB7 CMU Activities will start as from 08.00 am onwards.#สงกรานต์เมียนมาร์2562 #Myanmarthingyan2019#ช้างเผือกอยู่ในป่า ——————————————Special assistant : Maayethu AmpikaDhanoos SirivajarakornProducer: Sumet CharoensapPattarapong BoonyathummarongkulPhotographer : Chaliangpol DuenpenMake up: นรภัทร กรกมลYod NoppakunBom PanuwatActor: Pongsapak Komkris Ig: 11.ppkThitiwan Thananchai Ig: white_ttwOliver Ohrman Ig: OliverOhrmanPloy Nattaporn Ig: p.plyntpJirat Mueangchan Ig: nut_jiratJinierinsine Kampeera Ig: ginyginy Jimmy PotiwiHok Ig: jimmyyjpDanupon Boonyungte Ig: Iice_adeSurapod Saeyeang Ig: jacky_jackkNijo Spn Ig: ooojins
Posted by ช้างเผือกอยู่ในป่า-The white elephant inaforest. on Tuesday, April 2, 2019
လတ်တလော လူမှုကွန်ရက်မှာ ပျံလွင့်လာတဲ့ Video Clip လေးတစ်ခုကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံက လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နာ တစ်ခုက မြန်မာယဉ်ကျေးမှု အခါသင်္ကြန်မှာ ၀တ်ဆင်ကြတဲ့ မြန်မာတို့ရဲ့ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုနဲ့ ဖက်ရှင်တွေကို ခေါင်းအစ ခြေအဆုံး ကွဲလွဲမှု မရှိအောင် ကိုလိုနီခေတ်ကနေ ယနေ့ခေတ် ထိ ဆွဲဆောင်ဖန်တီးထားပြီး မြန်မာယဉ်ကျေးမှု အစဉ်အလာကြီးတစ်ခုကို အလေးထားတဲ့ အနေနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ လူမှုကွန်ရက်တစ်ခုက တင်ဆက်ဂုဏ်ပြုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း စိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုကတော့ ခုလို အနုပညာတင်ဆက်မှု ဖန်တီးမှုလေးတွေ မြန်မာအနုပညာလောကမှာ အတွေ့ရနည်းသလို ဖန်တီးမှုနဲ့ တင်ဆက်မှု လေးတွေ အတော်လေး အားနည်းတာ တွေ့ ရတာကြောင့် ဆယ်လီကမ္ဘာပရိသတ်ကြီးအတွက် ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။
Source: ช้างเผือกอยู่ในป่า-The white elephant inaforest.
khin Mi Mi @ CeleGabar;
မကွာခငျ ပရိသတျတို့ အားလုံးစောငျ့မြှျောနကွေပွီဖွဈတဲ့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ နှဈသဈအခါသမယလေးကတော့ တဖွေးဖွေးနီးကပျလို့လာပွီဖွဈသလို ပရိသတျတှလေညျး ဒီနရေ့ကျအခြိနျအခါလေးအတှကျ ကွိုတငျမြှျောလငျ့ရငျခုနျနကွေမှာပါ။
နှဈသဈအခြိနျအခါဟာ ခတျေအဆကျဆကျ မွနျမာနိုငျငံမှာ ကငျြးပလာခဲ့သလို ခတျေအလိုကျပွောငျးလဲလာတဲ့ ဖကျရှငျလျနဲ့ ဝတျစားဆငျယငျမှုဟာ အစဉျအလာကွီးမားတဲ့ မွနျမာတို့ရဲ့ ယဉျကြေးမှုနဲ့ ဓလထေုံ့းထမျးတှကေို ဖျောပွနသေလို မိုဘိုငျး အငျတာနကျခတျေတခုဖွဈလာတဲ့ ခုခတျေလူငယျတှနေဲ့ ဒီအစဉျအလာတှဟော အတျောလေး အလှမျးဝေးလာသလို ရှိလာတာဖွဈပါတယျ။
လတျတလော လူမှုကှနျရကျမှာ ပြံလှငျ့လာတဲ့ Video Clip လေးတဈခုကတော့ ထိုငျးနိုငျငံက လူမှုကှနျရကျ စာမကျြနာ တဈခုက မွနျမာယဉျကြေးမှု အခါသွင်ျကနျမှာ ဝတျဆငျကွတဲ့ မွနျမာတို့ရဲ့ ဝတျစားဆငျယငျမှုနဲ့ ဖကျရှငျတှကေို ခေါငျးအစ ခွအေဆုံး ကှဲလှဲမှု မရှိအောငျ ကိုလိုနီခတျေကနေ ယနခေ့တျေ ထိ ဆှဲဆောငျဖနျတီးထားပွီး မွနျမာယဉျကြေးမှု အစဉျအလာကွီးတဈခုကို အလေးထားတဲ့ အနနေဲ့ ထိုငျးနိုငျငံ လူမှုကှနျရကျတဈခုက တငျဆကျဂုဏျပွုဖျောပွထားတာဖွဈပါတယျ။ သို့သျောလညျး စိတျမကောငျးစရာတဈခုကတော့ ခုလို အနုပညာတငျဆကျမှု ဖနျတီးမှုလေးတှေ မွနျမာအနုပညာလောကမှာ အတှရေ့နညျးသလို ဖနျတီးမှုနဲ့ တငျဆကျမှု လေးတှေ အတျောလေး အားနညျးတာ တှေ့ ရတာကွောငျ့ ဆယျလီကမ်ဘာပရိသတျကွီးအတှကျ ဖျောပွလိုကျရပါတယျ။
Previous Previous post: ပရိသတ်တွေအတွက် Star Award ပွဲတက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ မြတ်သူသူဇင်
Next Next post: Star Award အတွက် ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်မင်းသမီးဆု ဆန်ကာတင် စာရင်းဝင် မင်းသမီးများ
ရူးခါသွားအောင်မိုက်တဲ့ နေခြည်ဦးရဲ့အမိုက်စား မိတ်ကပ်ပြင်ဆင်မှု
Published: December 6, 20182:00 pm
အက်ရှင်မင်းသားကြီး စတားလုံးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင်မသိသေးတဲ့ အချက်(၅)ချက်
Published: December 27, 20187:24 am
Author Aung Bwa
ပွဲဆူနေတဲ့ တရုတ်ရုပ်ရှင်အတွက် ယုတ္တိရှိရှိ မှတ်ချက်ပေးလိုက်တဲ့ ဦးဇင်ဝိုင်း
Published: February 16, 20195:38 pm Updated: 5:39 pm
ပါးပါးနဲ့မားမားဆီက စိန်တစ်ဆင်စာ လက်ဆောင်ရခဲ့တဲ့ သဉ္ဇာနွယ်ဝင်း
Published: December 15, 20185:38 pm
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ၁၇၀ ကျော် ကို ပညာတော်သင်ထောက်ပံ့ကြေးပေးမယ့် Bella
Published: December 5, 201811:15 am
ပရိသတ်တွေလူသိနည်းစွာနဲ့ လူ့လောကထဲက ထွက်ခွာသွားခဲ့ရတဲ့ F4 ဇာတ်ကားထဲက မင်းသမီးလေး
Published: March 15, 20193:18 pm Updated: 3:20 pm
စိုင်းစိုင်းသီချင်းကို ပြန်ဆိုခဲ့ကြတဲ့ ဦးအောင်လွင်နဲ့ ဇာဂနာတို့ရဲ့ ဗီဒီယို
Published: February 11, 201912:00 pm Updated: 1:19 pm
တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုကြောင့် သတို့သမီးတစ်ယောက်ဖြစ်သွားခဲ့ရတဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်
Published: December 31, 20188:56 am Updated: 12:59 pm
Fascinated by the neoclassical facade of the Cathedral of Granada
Published: February 23, 201710:09 am Updated: March 18, 20199:38 am
ရုံမတင်ခင်မှာဘဲ အခက်အခဲတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပြီဖြစ်တဲ့ လေဆန်ကကြိုး ရုပ်ရှင်
Published: March 29, 20196:03 pm